Sadaasaa 17, 2017
WAASHINTAN, DIISII —
Kan waggoota 37f taayitaa prezidaantummaa Zimbaabuwee qabatanii turan – Roobert Mugaabee, eega waraanni biyyattii jalqaba torban kanaa irra mana isaaniitti ugguran as har’a yeroo jalqabaatiif uummata duratti mul’atan.
Ka dadhabbiin irraa mu’atu – Mugaabeen, gaawaanii eebba barnootaa bifa uqulisaa fi keelloo wal-makaa qabu uffatanii, sagantaa eebba magaalaa Haraaree keessatti geggeessame irratti yeroo argamanitti eebbifamtoonni harka walitti-rukkutuun simatan.
Hoogganoonni mormitootaa, dhaabonni Siivilii fi gurmuuleen mirga dhala-namaa akka prezidaant Mugaabeen hatattamaan taayitaa gad-lakkisan ennaa gaafataa jiranitti, uummatni biyyattii akka danqaan gidduu kana mudate dafee furmaata argatu abdataa jiru. Garuu, Mugaaabeen amma illee ofiin taayitaa gad-lakkisuu sana akka fudhachuu didan tu odeessamaa jira. Prezidaantiin Afrikaa Kibbaas, Kaleessa ennaa paarlaamaa biyyattiif haasawa godhaniitti, dhimma kana irratti tarkaanfii cimaa fudhachuuf, yeroon isaa hin geenye – jedhanii turan.
Suuraan prezidaantichaa duraanii har’a bakka eebbaa sanaatti kaasame akka agarsiisutti, Hoogganaa humna waraanaa – Konistaantinoo Chiweengaa wajjiin dhaabbataa turan.
Dhimma argaarsaan ministara dhimma-alaa Yunaayitid Isteets – Doonaald Yamaamootoo, Zimbaabiween akka bara haaraatti ceetu abdii qaban.
Magaalaa Shaakkisoo Keessatti Hiriirri Mormii Gaggeeffamee Jira
Wal dhaba daangaa Oromiyaatii fi Somaaleetiin Oromoo kuma 600 olitti baqate-- waldaan Oromoo Kamise midhaan makiinaa hedduutiin dhufeef
Wallagga Lixaa Noolee Kaabbaa Keessatti Jiraattonni Reebichaa fi Hidhaa Himataa Jiru
Prez Traamp:Chaayinaan Lammiwwan Isheef Jecha Carraa Aragatteen Gargaaramuu Isheef Komatamuu Hin Qabdu